दार्चुलामा पनि फैलिँदै डेंगुको संक्रमण
दार्चुला – तराई क्षेत्रमा बढ्दो मात्रामा देखिने डेंगु पछिल्लो समय दार्चुला जिल्लामा पनि फैलिन थालेको छ ।
एडिस जातको पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने यो रोग गत साउनयता ४ जनामा देखापरेको जिल्ला अस्पतालले जनाएको छ ।
डेंगुका कारण ४ जना बिरामी अस्पताल आएकामा ३ जनालाई थप उपचारका लागि सेती अञ्चल अस्पताल धनगढी पठाइएको छ ।
जिल्ला अस्पताल दार्चुलाका सिनियर अहेव डम्मरदत्त भट्टका अनुसार हालसम्म लेकम गाउँपालिका–३ का १२ वर्षीया निरुता चन्द, महाकाली नगरपालिका–९ का १७ वर्षीय योगेश सामन्त, दुहुँ गाउँपालिका–३ का ३६ वर्षीय उत्तमबहादुर वम, वडा नं २ का ३० वर्षीय गोमती बम रहेका छन् ।
विगतमा तराईमा बसोवास गर्नेहरुमा मात्रै डेंगुको संक्रमण देखिन्थ्यो तर पछिल्लो समय पहाडी जिल्लामा पनि फैलिन थालेको भट्टको भनाइ छ । गर्मी र फोहरका कारण हरेक वर्ष जिल्लामा डेंगुको जोखिम बढ्दै गएको छ ।
जिल्ला अस्पताल दार्चुलाका प्रमुख डा. गजेन्द्र दुवालका अनुसार अहिलेसम्म डेंगुको संक्रमण देखिएका ४ जनामध्ये बाहिरी जिल्लाबाट फर्किएकामा २ जनामा यो रोग देखिएको हो । यो रोग लामखुट्टेले संक्रमित मानिसलाई टोक्ने र त्यो लामखुट्टेमा भाइरस विकास हुने हुँदा स्वस्थ मानिसमा समेत सर्न जाने गरेको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । गत वर्ष जिल्लामा १३ महिला र ७ जना पुरुषमा डेंगु रोगको संक्रमण देखिएको थियो ।
‘बर्सातको समयमा जताततै पानी जम्दा लामखुट्टेले फुल पार्ने मौका पाउँछ,’ डाक्टर दुवालले भने, ‘हरेक वर्ष साउन/भदौमा डेंगुका कारण बिरामी बढ्ने गर्छन् ।’
केहीलाई यही समयमा बढी भाइरल ज्वरोले समात्ने गर्छ । डेंगु रोग लागेपछि एक्कासि उच्च ज्वरो आउने, धेरै टाउको दुख्ने, शरीरमा बिमिरा आउने, रक्तस्राव हुने, आँखाको गेडी तथा टाउको पछिल्लो भाग बढी दुख्ने यसका लक्षण हुने गरेको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । डेंगुबाट बच्नका लागि लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्ने, आफू बस्ने वरिपरि पानी जम्न नदिने, पानी ट्यांकीलाई १ हप्तामा सफाइ गर्ने लगायतका कार्य गर्न सकिने उनीहरूको सुझाव छ ।
दार्चुलाका सबै स्वास्थ्य संस्थामा अहिले भाइरल ज्वरोको प्रकोप बढेको छ । ९ वटै स्थानीय तहका स्वास्थ्य चौकी र २ वटा अस्पतालमा भाइरलका बिरामीको चाप बढेको हो । मौसममा आएको परिवर्तनका कारण भाइरल ज्वरोका बिरामी बढेको डा. दुवाल बताउँछन् ।
जिल्ला अस्पताल दार्चुलामा आउने झण्डै १ सय बिरामीमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी भाइरल ज्वरोका बिरामी आउने गरेका छन् । पानी फोहर हुनु, खानामा ध्यान नदिनु जस्ता कारणले अहिले बिरामीको चाप बढेको छ ।
गोकुलेश्वर अस्पतालमा समेत भाइरल ज्वरोका बिरामी बढेका छन् । दैनिक ५०/६० जनासम्म भाइरल ज्वरोका मात्रै बिरामी आउने गरेको अस्पतालले जनाएको छ ।
भिटामिन डीको कमी भएमा देखिन्छन् यस्ता समस्या
सुत्दाखेरी सिरानीमुनि राख्नुस् कागती, हुनेछन् यस्ता ...
आठबीसमा सय शय्याको ट्रमा सेन्टर बनाउने सम्झौता, एमब...